I-300 Swinging Ladder Dredge Igcwalisa iGeotubes - I-Ellicott Dredges Blog
Kwangathi 1, 1996
Source: UMHLABA WONKE WOKUGUQUKA Imayini Nezokwakha
ILake Kittarnaqundi lingama-27-ac. ichibi eliseColumbia, eMaryland, elidume njengelinye lamadolobha ahlelwe kuqala eMelika — futhi aphumelela kakhulu. Ngentwasahlobo ka-2010, i-The Columbia Association, abanikazi bechibi, baqasha uCashman ukuthi asule le nhlabathi nokhula olwalunqwabelene selokhu kwakhiwa leli chibi. Ithimba lakwaCashman liwuhlolile lo msebenzi, lahlonza izinselelo ezimbili ezibalulekile zezinto zokusebenza, futhi laqala ukuhlela okunemininingwane okuzobenza bakwazi ukuqedela umsebenzi.
I-Ellicott® Brand 670 Dredger esebenza eLake Kittamaqundi
Okokuqala, i-Kittamaqundi yahlanganiswa namanzi i-thyme (hydrilla vertieillata) - ukhula lwasemanzini olunesiqu esinezihlahla ezixubile lungafinyelela kalula kubude be-25 ft. Ukwazi ukuzisakaza usuka echibini kuya phezulu, lezi zitshalo ezikhula ngokushesha zakha imichilo eboshwe kakhulu, ekugcineni ephazamisa ukuhamba kwamanzi okujwayelekile. Ngoba i-hydrilla ingakha umquba ngaphandle kwezinye izitshalo ezibalulekile ngokwemvelo futhi iguqule amakhemikhali wamanzi namazinga we-oksijini, ibhalwe kuhlu lwe-US Federal Noxious Weed. Ochwepheshe bokuphonsa amanzi abanolwazi bazi kahle kamhlophe ukuthi i-hydrilla ingadonsa kanzima ngemishini yokuphelisa amanzi, inciphise ijubane lomsebenzi. Hhayi lokho kuphela; ngoba isitshalo singakhula kalula kusuka kuzingcezwana zesiqu, kufanele sisuswe ngokunakekelwa. UCashman wanquma ukuvuna ichibi, futhi asuse imfucumfucu ogwini nolwandle. Uma lokhu sekwenziwe, ukuphinda ubambe kabusha kungaqhubeka kahle.
Swinging Ladder Dredger yayisetshenziselwa ukugcwalisa iGeotubes kanye ne-Shawow Dredging
Okwesibili, ukuze kuncishiswe ukuphazamiseka kwempilo yansuku zonke yezakhamizi eziseduzane, indawo esebenza ngaleli sayithi ethile bekufanele igcinwe endaweni encane kakhulu engenzeka. Le nselelo yanakwa kakhulu njengoba uhlelo lwephrojekthi lwakhiwa. Ukuhlolwa kwesiza kukhombisa ukuthi okuzobekwa phansi kabusha kuyehlukahluka ngokwakhiwa; ezinye izindawo zahlelwa ngotshani obukhulu; kwezinye, phansi bekubanzi futhi kunesihlabathi. Ukuhlanza zombili lezi zinhlobo zezinto zokwakha bekuyizidingo, njengoba kuhlale kunjalo (ukunciphisa ithoni) lapho impahla ebanjiswa kabusha kufanele iloliwe futhi ichithwe ekulahleni komhlaba. Ngemuva kokubheka imingcele yephrojekthi iyonke, abaphathi bakwaCashman bakhetha indlela eyi-hybrid yokususa emanzini.
Babeletha umakhenikha wokuphelisa amanzi kanye nomshini wokuhlunga wokuxuba isobho okuvela ezindaweni ezinosilika, beconsa ukugcwala nge-flocculant njengoba bekuphayishwa kusukela ophikweni olungamanzi kuya emaphephandabeni. Ngaleso sikhathi, izinto ze-coarser bezizongxhunywa ngqo kwi-200 ft ende, 50-ft dieter geotubes. Ngenkathi ukwelashwa kwama-geotubes nokwelashwa kwe-flocculant nakho kungasebenzela ukubumbana okuhle, ukusebenzisa ama-geotubes kuphela bekuzodinga ukusabalalisa iphrojekthi endaweni enkulu kakhulu. Kusetshenziswa inhlanganisela yamayunithi wokukhulula amanzi nama-geotubes anike amandla i-Cashman ukuhlanganisa isiza sawo semishini sokudonsela amanzi endaweni evunyelwe ngaphansi kwehektare.
Abasebenzi bakwaCashman, lapho befika esizeni, basheshe babona enye inkinga — mhlawumbe hhayi ukukhathazeka okukhulu, kepha noma kunjalo, leyo eyayizothinta impilo yezakhamizi phakathi namasonto umsebenzi wokudonsa wawusaqhubeka: indlela yokuhamba esetshenziswa kakhulu ukuvinjelwa. Ithimba lephrojekthi lasheshe laqhamuka nesisombululo esigculisayo. Ngaphambi kokubiyela indlela yokuhamba, abasebenzi bakaCashman badala umzila odabula emahlathini aseduze futhi basabalalisa ungqimba oluningi lwama-chip chips ukuze abantu ababejwayele ukusebenzisa indlela yezinyawo ezungeze ichibi babe nendawo yokuhamba nsuku zonke.
Yilolu hlobo lokunakwa kuyo yonke imininingwane — ngaphambi kokuba umsebenzi uqalwe — okwenza umehluko phakathi kokwenza umsebenzi nokuwenza ngendlela engcono kakhulu. Ukwehliswa kabusha kungumsebenzi obizayo, utshalomali olukhulu. Amaklayenti alindele ukuthi usonkontileka aqedele umsebenzi awuqede kahle, nazo zonke izinselelo zobuchwepheshe ahlangabezane nazo.
Ngaphandle kwalokhu, abaphathi bakaCashman bakholelwa ukuthi, isisekelo sangempela sokwaneliseka kwamakhasimende futhi, ekugcineni, idumela lenkampani, kuncike ezintweni ezingabonakali nakokungenakulinganiswa: ukuvikela umphakathi othintekile ekuphazanyisweni okungagwemeka kwikhwalithi yabo yokuphila; gcina ama-oda wokushintsha abe ubuncane obukhulu; futhi njengoba umsebenzi uqhubeka, phila ngokuthembela kweklayenti ebuchwepheni beqembu lokwehla. Konke lokhu kungafezwa kuphela ngokuhlela okucabangayo nokuhlolisisa.
Ishicilelwe kabusha kusuka eMhlabeni kanye Nezokwakhiwa Kwezimayini Zomhlaba